5-da Siyaabood ee ugu Sareeya ee lagu heli karo daawadayaasha inay ka faalloodaan fiidiyowyadaada YouTube - YTpals
Abuurayaasha nuxurka YouTube waxay ku shaqeeyaan istiraatiijiyadooda SEO si ay kor ugu qaadaan tartamayaashooda oo ay u horumariyaan darajooyinkooda YouTube. Marka fiidyaha la kala sarreeyo, algorithmamka YouTube ayaa sidoo kale tixgalinaya ka qaybgalka daawadayaasha. Waxaa jira qaar ka mid ah tilmaamayaasha muhiimka ah ee aad u baahan tahay si aad u aqoonsato dabeecadda ka qaybgalka daawadayaasha organic. Kuwani waa - muuqaallada YouTube-ka bilaashka ah, jecel YouTube-ka bilaashka ah, saamiyo YouTube oo bilaash ah, YouTube-ka oo lacag la’aan ah, iyo faallooyinka YouTube ee bilaashka ah.
Kanaalada cusub mararka qaarkood way ku adag tahay in isla markiiba la gujiyo YouTube. Taas macnaheedu maaha inaad u baahan tahay inaad quusto sababtoo ah waxaa jira siyaabo badan oo badan oo aad ku heli karto dhagaystayaashaada inay kula hawl galaan.
Ciyaarta qaybta faallooyinka
Ka sokow bixinta jawaab-celinta daawadayaasha qiimaha leh, faallooyinka fiidyowgaagu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan kor u qaadista ka qaybgalka fiidyaha iyo ballaarinta gaaritaankaaga suuqgeyn faallooyin ah. La yaab ma leh abuurayaasha YouTube inta badan iibso faallooyinka YouTube! Aan eegno dhowr xeeladood si aan uga helno faallooyin dabiici ah oo badan fiidiyowyadaada YouTube.
Ka jawaabista faallooyinka & ka-qaybgalka doodaha
La qaybso daawadayaashaada adiga oo ka faalloonaya fiidiyowyadaada oo hormood u ah doodaha. Hubi inaad si degdeg ah uga jawaabto faallooyinka fiidiyowyadaada. La falgalka daawadayaashaada waxay ku martiqaadi kartaa ka qaybgalka, kor u qaadida kalsoonida kanaalkaaga, waxayna gacan ka geysan kartaa wadista taraafig badan. Faallooyinka la taaban karo, u jawaabida mid walba waxay noqon kartaa mid caajis ah oo dhib badan waqti ka dib. Waxaa laga yaabaa inaad tixgeliso inaad isticmaasho aaladaha leh Jawaabta Wacan iyo xulashooyinka Jawaabcelinta qasacadaysan.
Ku martiqaadida jawaab celin iyo talooyin
Ku dhammee fiidiyowyadaada su'aalo oo ku martiqaad faallooyinka daawadayaasha. Waxaad waydiisan kartaa daawadayaashaada ra'yi-celin oo aad isku daydo inaad hirgeliso jawaab celin kasta oo wax dhisaysa. La soco talooyinka daawadayaasha oo hirgeli inta ugu badan ee la soo jeediyay. Dooro codsiyada ugu caansan oo samee fiidiyowyada mustaqbalka si aad u daawato dookhyada daawadayaashaada.
Qabashada fadhiyada su'aalaha iyo jawaabaha
Ku dhawaaq kulannada su'aalaha iyo jawaabaha aan rasmiga ahayn (Q&A) kuna dhiiri geli daawadayaasha inay waydiiyaan su'aalo ama su'aalo kasta oo ay qabaan. Waa inaad haysataa muuqaallo aad u go'an si aad u qaadatid ugana jawaabto su'aalahan. Kulamada daawashada tooska ah si looga jawaabo su'aalaha daawadayaasha ayaa ah bedel wanaagsan, kaas oo u sahla daawadayaasha inay kula hawl galaan wakhtiga dhabta ah. Tixgeli ku dhawaaqida deeq-bixinno ku dhiirigelinaya daawadayaasha inay ka faalloodaan fiidyahaaga. U samee hadiyado toddobaadle ama bille ah dhawr daawadayaal si aan kala sooc lahayn loo doortay kuwaas oo ka faallooda fiidyahaaga. Fiidiyowyada noocan oo kale ah ayaa ah kuwo si heersare ah loo wadaagi karo. Laakiin, si aad ugu dhiirigeliso dhagaystayaashaada inay la wadaagaan, mar walba waad awoodaa iibso saamiyada YouTube. Lahaanshaha mala-awaalka saamiyo badan ayaa had iyo jeer dadka ku qasabta inay si dabiici ah u wadaagaan waxa ku jira.
Trolling waa dhibaato baraha bulshada caam ah, YouTubena lagama dhaafo. Xeeladda ugu fiican waa in laga fogaado diidmada oo la iska indhatiro dhammaan trolls. Waxaa lagugula talinayaa inaadan la galin sheeko aan faa'iido lahayn oo trolls ah. Ka jawaabista faallooyinka nacaybka leh waxay u abuuri kartaa sumcad xumo kanaalka. Trolls waxay u ekaan kartaa mid yar oo aan dhib lahayn, laakiin faallooyinkooda xun ayaa awood u leh inay kaxeeyaan daawadayaasha dhabta ah ee raba inay la falgalaan kanaalkaaga. Si aad uga fogaato xanaaqa joogtada ah iyo wax kasta oo saameyn xun ku yeelan kara korriinka kanaalkaaga, waxaad haysataa ikhtiyaarka ah inaad joojiso ama qarinayso faallooyinka trolls.
La falgalka kanaalada kale ee YouTube
La soco hal-abuurayaasha caanka ah iyo kuwa soo socda ee ku jira meeshaada oo la falgeli iyaga. La soco kanaalkooda oo ku rid faallooyin caqli-gal ah ama faallooyin macno leh fiidiyowyadooda si ay u furaan doodaha. Ka-qaybgalka soo noqnoqda waxay heli doontaa in la ogaado kanaalkaaga, tani waxay sidoo kale ku dhiirigelin doontaa abuurayaasha kale inay ka jawaabaan oo ay tuuraan faallooyin caqli-gal ah fiidiyowyadaada. Waxa kale oo aad kula talin kartaa kanaalada kale ee YouTube iyada oo loo marayo fiidiyowyadaada. Qaar ka mid ah daawadayaashaada daacadda ah ayaa laga yaabaa inay arkaan kanaalada lagugula taliyay ama fiidyaha. Ku dhiiri geli inay ka faalloodaan fiidiyowyada YouTube-ka ee sheegaya magaca kanaalkaaga. Abuurayaasha kale ayaa sidoo kale kuu soo celin doona raallinimadaada oo ku wadi doona taraafikada kanaalkaaga, iyaga oo ballaarinaya marinka kanaalkaaga. Waxa kale oo aad abuuri kartaa fiidiyowyo wadashaqayn leh hal-abuurayaasha kale ee nuxurka oo aad kasbato soo jiidashada daawadayaasha la isku daray.
Ku soo jiidashada daawadayaasha inay ka faalloodaan fiidiyowyadaada YouTube waxay u baahan tahay hab xeeladaysan. Istaraatiijiyado aasaasi ah oo dhowr ah ayaa kaa caawin doona inaad abuurto gole is-dhexgal ah saldhigga daawadayaashaada, taas oo, iyaduna, dardargelin doonta kobaca kanaalkaaga.
Haddii aad u baahan tahay caawimo xirfadle ah iibso YouTube jecel iyo faallooyinka, YTpals waxay bixin karaan hagitaan habboon. Waxaan leenahay khibrad si aan ku barano oo aan gacan uga geysano kor u qaadista ka-qaybgalkaaga YouTube. Waxaan sidoo kale ku caawin karnaa iibso saacadaha daawashada YouTube.
Ugu dambeyntii, haddii aad rabto inaad abuurto macaamiil YouTube bilaash ah, markaa maxaa diidaya iibsato macaamiisha YouTube nooga yimid? Markaad eegto macaamiil badan oo ku jira kanaalkaaga, waxaad bilaabi doontaa inaad soo jiidato macaamiisha organic kuwaas oo korin doona inay jeclaadaan akoonkaaga. Iyada oo loo marayo YTPals, waxaad sidoo kale ka heli kartaa faallooyinka YouTube-ka bilaashka ah.
5-ta Siyaabood ee ugu Sareeya ee lagu heli karo Daawadayaasha inay ka faalloodaan Fiidyahaaga YouTube waxaa qoray YTpals Writers, 25 May 2022
Tilmaamaha bilowga ah ee marin u helka YouTube metrik & Xogta - Waxa La Ogaado
Sida bogga Facebook u jecel yahay iyo kuwa raacsan ee Instagram, YouTube sidoo kale waxay leedahay qiyaaso shaqsi ku saleysan oo dhowr ah oo ah qaab “saaxiibbo” iyo “macaamiil” ah. Waxay kuxirantahay goobaha aad dooratay, noocyada isticmaala qaarkood on
Ku Dhaqanka YouTube SEO Ugu Fiican 2021
YouTube waa mashiinka raadinta labaad ee ugu weyn adduunka marka laga yimaado Google. Kordhinta ay caan ku noqotay wax aan ka yarayn taariikhi ahaan. Sida aad u isticmaasho xeeladaha SEO si aad uga dhex muuqato natiijooyinka ugu sarreeya Google,…